Matilda: जादू को पठन मा निहित छ वर्तमान साहित्य
जुआन अर्टिज | 16/10/2021 23:04 | अद्यावधिक गरियो 17/10/2021 05:10 | लेखकहरू, किताबहरु, युवा साहित्य
Matilda प्रख्यात उपन्यासकार Roald Dahl द्वारा लिखित बाल साहित्य को एक क्लासिक हो। एंग्लो-सक्सन मा यसको मूल संस्करण अक्टोबर १ 1988 published मा प्रकाशित भएको थियो र ब्रिटन क्वेन्टिन ब्लेक द्वारा चित्रण चित्रित। स्पेनिश मा यसको संस्करण Pedro Barbadillo द्वारा एक अनुवाद संग सम्पादकीय Alfaguara द्वारा प्रस्तुत गरिएको थियो; यो संस्करण ब्लेक को काम बरकरार राखेको छ।
Matilda यो ब्रिटिश लेखक को सबैभन्दा सफल कथाहरु मध्ये एक हो; आज काम को लाखौं प्रतिहरु बेचिएको छ। उपन्यास - एक बच्चाहरु को किताब भएको बावजूद - धेरै पुस्ताहरु लाई जिते, सबै रचनात्मकता र लेखक को शानदार कथा कथन को लागी धन्यवाद। यसको उल्लेखनीय प्रभाव को कारण, 1996 मा उपन्यास को homonymous फिल्म अनुकूलन प्रस्तुत गरिएको थियो; फिल्म डैनी Devito द्वारा निर्देशित गरिएको थियो।
1 Matilda सारांश
1.1 थोरै उज्यालो
1.2 उनको परिवारले गलत बुझे
1.3 पुस्तकालय र स्कूल अध्ययन
1.4 मीठो शिक्षक बनाम दुष्ट प्रधान शिक्षिका
1.5 जीवन को एक परिवर्तन
3.1 माटिल्डा वर्मवुड
3.2 निर्देशक Trunchbull
3.3 श्री र श्रीमती Wormwood
3.4 अन्य पात्रहरू
4 लेखक को बारे मा, रोआल्ड Dahl
4.1 पहिलो काम
4.2 साहित्यिक क्यारियर
4.4 Roald Dahl को केहि कामहरु
4.4.1 बच्चाहरूको पुस्तकहरू
4.4.2 कथा संकलन
Matilda एक5वर्षीय केटी जो एक सानो अंग्रेजी शहर मा आफ्नो आमा बुबा र उनको भाई संग रहन्छन्। उनी उनी एक निडर र जिज्ञासु केटी हुन्, जो केवल ३ बर्ष को उमेर मा एक आत्म-सिकाइएको तरीका मा पढ्न सिके। जबदेखि उनले किताबहरुको ब्रह्माण्ड पत्ता लगाए, उनको जीवन परिवर्तन भयो। एक धेरै छोटो समयमा उहाँले धेरै लेखकहरु, जो विभिन्न क्षेत्रहरुमा आफ्नो ज्ञान को विस्तार पढ्नुभयो।
उनको परिवारले गलत बुझे
दुर्भाग्यवस, Matilda को आमा बुबा उनको प्रतिभा कदर थिएनतिनीहरूले उनलाई एक घटना मानीन् र लगातार उनको मजाक बनाइन्। उनीहरु, सजायको रूपमा, उनीहरुले उनलाई घन्टा टेलिभिजन हेर्न बाध्य पारे, उनीहरुले उनको नयाँ किताब किनेनन् र उनीहरु हरेक दिउँसो उनलाई घरमा एक्लै छोडिदिन्छन्। यो धेरै पहिले Matilda ध्यान दिईयो कि उनी आफ्नो आमा बुबा भन्दा होशियार थियो, त्यसैले उनी वास्तव मा के महत्त्वपूर्ण छ को बारे मा आफ्नो जंगली विचारहरु लाई बेवास्ता गर्न थाले।
पुस्तकालय र स्कूल अध्ययन
Matilda दिन को धेरै को लागी आफ्नो आमा बुबा बिना थियो, उनले हरेक दिन पुस्तकालय जाने निर्णय गरे, क्रम मा सिक्न को लागी आफ्नो इच्छा पूरा गर्न को लागी। त्यो ठाउँमा उनी अत्यन्त खुशी लाग्यो, किनकि उनी समस्या बिना पढ्न र नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्थे। उसको पठन संग आत्मसात गरेको सबै कुरा उसलाई उसको साथीहरु बाट बाहिर उभिन अनुमति दिईयो विद्यालयको।
मीठो शिक्षक बनाम दुष्ट प्रधान शिक्षिका
Matilda को क्षमताहरु पढ्ने र गणित संग उनीहरु शिक्षक हनीलाई चकित पारे, जसले अनुरोध गरे कि उनी स्तर मा पदोन्नति गरिनेछ। जे होस्, जुन निर्देशक ट्रन्चबुल द्वारा राम्रो संग प्राप्त भएको थिएन, र, आफ्नो पद को दुरुपयोग, अनुरोध अस्वीकार। यो व्यवहार शिक्षक आश्चर्यचकित छैन, "प्राधिकरण" को नराम्रो स्वभाव पहिले नै सार्वजनिक ज्ञान थियो पछि; वास्तव मा, यो दुष्ट महिला को लागी घृणा संग बच्चाहरु लाई व्यवहार र औचित्य बिना उनीहरुलाई सजाय दिन को लागी सामान्य थियो।
जीवन को एक परिवर्तन
पहिले नै कथानक प्रवेश, मटिल्डाले पत्ता लगाए कि उनीसँग अर्को प्रकारको मानसिक शक्ति थियो: टेलिकिनेसिस (उसले आफ्नो दिमाग संग वस्तुहरु सार्न सक्छ)। त्यो कौशल को विकास मा, हनी धेरै सहयोगी थियो। तर, को खोज त्यो "सुपर पावर" ले Matilda लाई अधिक बल संग सामना गर्नु पर्छ दुई विशाल बाधाहरु कि यो पहिले नै भोग्नु परेको थियो: द्वारा लगाईएको सीमाहरु उहाँका आमा बुबा र विपक्षी र दुष्ट Trunchbull को दुर्व्यवहार.
यो एक विधा संग सम्बन्धित उपन्यास हो बाल साहित्य 248 पृष्ठहरु मा विभाजित छ कि खुलासा २ short छोटो अध्यायहरू। इतिहास छ एक सर्वज्ञ बयान द्वारा भनिएको छ। पाठ एक साधारण शब्दावली संग प्रस्तुत छ कि एक धाराप्रवाह र छिटो पढ्न अनुमति दिन्छ।
यो कथा को नायक हो। बारेमा एक बच्चा एक अविश्वसनीय, हेरचाह व्यक्तित्व र अजीब अलौकिक कौशल संग अद्भुत। उनी लगातार अस्वीकार र उनको आमा बुबा द्वारा परेशान छन्। सानी केटीको जीवन परिवर्तन हुन्छ जब उनी प्राथमिक विद्यालयमा प्रवेश गर्छिन्, उनको शिक्षकको समर्थन र माया र उनी आफ्नो नयाँ साथीहरु संग स्थापित सम्बन्ध को लागी धन्यवाद।
उनी एक प्राथमिक विद्यालयकी शिक्षिका हुन्, मायालु र उनको विद्यार्थीहरु लाई समर्पित। Matilda उनको आरोप अन्तर्गत सानो मध्ये एक हो। पहिलो बैठक बाट, दुबै एक धेरै विशेष स्नेह को विकास। उनीहरुको सम्बन्ध समय संगै बलियो हुन्छ, बिन्दुमा कि हनी नायक को जीवन मा प्रमुख व्यक्ति बन्छ।
प्राथमिक विद्यालय को निर्देशन को प्रभारी हुनुको अलावा, यो काम को विरोधी हो। उनको व्यक्तित्व मास्टर हनी को बिल्कुल प्रतिकूल छ। शारीरिक रूप मा यो को रूप मा वर्णन गरीएको छ एक बलियो र नराम्रो अनुहार महिला। तिनीहरूको विकृत स्वाद बीच बच्चाहरु लाई कडा र क्रूर सजाय को उपयोग को खुशी लाई हाइलाइट गर्दछ, उनीहरुलाई अँध्यारो कोठा मा घण्टा को लागी ताला लगाए जस्तै।
श्री र श्रीमती Wormwood
उनीहरु सानो Matilda को जैविक आमा बुबा हुन्। उनीहरु दुबैको खराब बानी छ र धेरै कम IQ छ। आमा बेरोजगार जुवा खेल्छिन् र सतही। यसको भाग को लागी, बुबा संदिग्ध मूल को व्यापार वाहनहरु लाई समर्पित छ, जसले उसलाई निरन्तर कानूनी समस्यामा राख्छ।
माइकल Matilda को जेठो भाई हो, एक युवा टेलिभिजन हेर्ने लत र उनको आमा बुबा द्वारा overrated - जो बच्चा लाई अपमानित गर्न को लागी यो प्रयोग गर्दछ। यसबाहेक, त्यहाँ Matilda को साथीहरु छन्, जसमा Lavender बाहिर खडा छ, एक निडर केटी जो नायक को सबैभन्दा राम्रो साथी बन्छ।
लेखक को बारे मा, रोआल्ड Dahl
रोआल्ड डाहलको जन्म सेप्टेम्बर १३, १ 13 १ मा कार्डिफ, वेल्याण्डको लल्याण्डफ शहरमा भएको थियो। उनका आमा बुबा सोफी म्याग्डालीन Hesselberg र Harald Dahl, दुबै नर्वे बाट थिए। उहाँले क्याथेड्रा स्कूल र सेन्ट पीटर स्कूल मा आफ्नो प्राथमिक ग्रेड मा भाग लिनुभयो, जबकि माध्यमिकहरु Repton स्कूल मा थिए।
१ 18 बर्षको उमेरमा, उनी रोयल डच शेल, एक तेल कम्पनी मा काम गर्न थाले जसले उनलाई महान विलासिता मा बस्न अनुमति दियो। १ 1939 ३ In मा उनी रोयल एयर फोर्समा सामेल भए, त्यहाँ उहाँले आफ्नो पहिलो उडान प्रशिक्षण गर्नुभयो र छ महिना पछि उनी आरएएफ को th० औं बटालियन को लागी नियुक्त गरीयो। 1940 मा, जबकि इजिप्ट बाट लिबिया सार्दै, उनी एक गम्भीर दुर्घटनामा परेका थिए जसले उनलाई दुई महिनाको लागि अन्धा बनायो।
1942 मा एक लेखक को रूप मा आफ्नो क्यारियर शुरू, sवा पहिलो फिल्म नाटक थियो अती सजिलो, जुन मा प्रकाशित भएको थियो शनिबार साँझ पोष्ट. यो उनको विमान दुर्घटनामा आधारित कथा हो। त्यसपछि, उहाँले आफ्नो पहिलो बच्चाहरु को खेल प्रस्तुत: Gremlins (१ 1943 ४३)। यी अजीब बच्चाहरु को किताबहरु को निर्माण ले उनलाई महान साहित्यिक मान्यता ल्यायो। उनको कामहरु मध्ये, सफलता बाहिर खडा: चार्ली र चकलेट कारखाना (1964), बोक्सीहरु (1983) र माटिल्डा (1988)।
Dahl पनि वयस्क विधा मा dabbled, अप्रत्याशित अन्त्य संग गाढा हास्य को कथाहरु संग। आफ्नो क्यारियर को दौरान उनले यस प्रकार को साठ भन्दा बढी कथाहरु कि पत्रिकाहरु मा प्रकाशित गरीएको थियो जस्तै लेखे: हार्पर गरेको, प्लेबय y महिला होम जर्नल। पछि, यी anthologies मा संकलित थिए। साथै, केहि कथाहरु फिल्म र टेलिभिजन को लागी अनुकूलित गरीएको थियो, जस्तै: दक्षिण का पुरुषहरु y अप्रत्याशित कथाहरु।
S० को दशक मा उनले सिनेमा को लागी स्क्रिप्ट लेखे, ती मध्ये एक थियो जेम्स बण्ड, मात्र तिमी दुई पटक बाँच, इयान फ्लेमिंग द्वारा एक उपन्यास को अनुकूलन। 1971 मा उनले फिल्म को लागी आफ्नो बच्चाहरु को किताबहरु मध्ये एक लाई अनुकूलित गरे विली Wonka र चकलेट कारखाना।
बर्षहरु बित्दै जाँदा, Dahl एक प्रमुख लेखक बन्नुभयो। उनले उपन्यास, कविता, कथा र स्क्रिप्ट सजिलै संग सम्हाले। उनको पवित्रता उनको व्यापक र राम्ररी विस्तृत काम द्वारा मात्र नभई विश्व भर मा २०० मिलियन भन्दा बढी प्रतिलिपिहरु बेच्न को लागी प्रबन्ध गरीएको थियो।
रोआल Dahl २३ नोभेम्बर १ 23 ० मा ग्रेट मिससेन्डेनमा मृत्यु भयो, ल्यूकेमिया संग लडाई हारे पछि.
Roald Dahl को केहि कामहरु
ग्रेम्लिन्स (१ 1943 ४३)
जेम्स र बदाम विशाल (1961)
चार्ली र चकलेट कारखाना (1964)
जादुई औंला (1966)
सुपर फक्स (1970)
चार्ली र महान गिलास लिफ्ट (1972)
डैनी विश्व च्याम्पियन (1975)
El विशाल गोही (1978)
जर्जको अद्भुत औषधि (1981)
ठूलो राम्रो स्वभावको विशाल (1982)
जिराफ, पेलिकन र बाँदर (1985)
Agu ट्रोट (1990)
विकर जो पछाडि बोल्यो (1991)
द मिम्पिन्स (1991)
Roald Dahl को सर्वश्रेष्ठ लघुकथाहरु (1978)
उत्पत्ति र प्रकोप (1980)
असाधारण कथाहरु (1977)
अप्रत्याशित कथा (1979)
बदला मेरो SA हो (1980)
कथाहरू पूरा गर्नुहोस् (2013)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » युवा साहित्य » Matilda